Afrika oo ku Heshiiyay Her-gelinta Ganacsiga Xorta ah
Laakiin, iyadoo waddan kasta oo ka mid ah 54 dal ee ku jira Midowga Afrika ay heysato dhibaato dhaqaale oo u gaar ah, iyo mushkilad siyaasadeed, ayaa haddana waxaa madax shirkan ka qeyb galeysa hor-yaalla caqabado badan oo ay tahay inay iska leexiyaan si ay u rumeeyan ganacsiga xorta ah ee ay doonayaan.
Wariyaha VOA, Daniel Schearf, ayaa warbixintan ka soo diray Nayroobi. Waa kan Xuseen Barre Aaden oo inoo soo jeediya.
Afrika oo ku heshiisey ganacsiga xorta ah
Dhanka kale, Soomaaliya, ayaa ka mid ah dalalka saxiixay heshiiskaasi. Haddaba, Maxamed Colaad Xasan ayaa khadka telefoonka ee Kigali ku wareystay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya, Axmed Ciise Cawad.
Dhageyso Wasiir Cawad oo ka hadlaya Ahmiyadda Soomaaliya ee Shirka Kigali